प्रिय ग्राहकहरु, कोरोना संकटको कारण, पार्सल ढिलाइ हुन सक्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि केहि डेलिभरीहरू तपाईं पछि प्रयोग भइसकेका छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। केहि अवस्थाहरूमा, डेलिभरी 3- additional अतिरिक्त व्यवसाय दिन लिन सक्दछ।
इको पुन: प्रयोज्य वस्तुहरू
प्याकेजि materials सामग्री
अनुरोध परीक्षण नमूनाहरू
उपहार कार्ड किन्नुहोस्
पाम पात उत्पादनहरू
फ्रेन्च फ्राइ ब्यागहरू
पुन: प्रयोज्य उत्सव चश्मा
पुन: प्रयोगयोग्य स्ट्राहरू
पेय को लागि perforators
रीड र स्ट्र स्ट्राहरू
टेप र प्याडि materials सामग्री
स्ट्यान्ड-अप पाउच कागजबाट बनेको छ, १००% प्लास्टिक मुक्त
तह हात तौलिए
एक रोलमा तौलिया कागज
कागज तौलिया र ऊतकहरू
कार्डबोर्ड बियर ट्रेहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
मुद्रित कागज कफी कपहरू
कागज शंकु ब्यागहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
कागज स्ट्रुमा प्रिन्ट गर्दै
मुद्रित कागज नाश्ता ब्यागहरू
मुद्रित कागज नाश्ता ट्रे
कागजको झोलामा छाप्नुहोस्
बांस कटलरी कुँदेर
खोपेर काठको कटलरी
खाना प्याकेजि on मा मुद्रांकन
गैर-खाद्य प्याकेजि onमा स्ट्याम्पि।
- - बायोडाइस्पोजेबलहरू
- - इको पुन: प्रयोज्य वस्तुहरू
- - स्वच्छता उत्पादनहरू
- - प्याकेजि materials सामग्री
- - बिक्री कुना
- - परीक्षण नमूनाहरू अनुरोध गर्नुहोस्
- - उपहार कार्ड किन्नुहोस्
- एल्युमिनियम उत्पादनहरू
- Bagastro उत्पादनहरू
- बगसे उत्पादनहरू
- बाँस उत्पादनहरु
- बायोप्लास्टिक उत्पादनहरू
- काठका उत्पादनहरू
- नरिवल उत्पादनहरू
- पाम पात उत्पादनहरू
- कागज उत्पादनहरू
- स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरू
- स्ट्रौ उत्पादनहरू
- मनोरञ्जन व्यंजनहरु
- Baguette बक्सहरू
- खानपान बाकस
- खानपानका भाँडाहरू
- कम्पोस्ट झोला
- बोरा बोक्दै
- ट्रेहरू बोक्दै
- खाद्य स्ट्राहरू
- फ्रेन्च फ्राइ झोला
- पेस्ट्री बक्सहरू
- बर्गर बक्सहरू
- पुन: प्रयोज्य उत्सव चश्मा
- पुन: प्रयोज्य स्ट्राहरू
- आइसक्रीम कप
- कफि कपहरू
- खाना ट्रे
- मेनू बक्सहरू
- मिल्कशेक कप
- नूडल बक्सहरू
- कागज स्ट्राहरू
- पेय को लागि perforators
- व्यक्तिगत हेरचाह
- पिज्जा बक्सहरू
- प्रस्तुति तखताहरु
- रीड र स्ट्र स्ट्राहरू
- सलाद ट्रे
- सॉस कप
- स्न्याक ट्रे
- सूप कप
- सुशी ट्रे
- टॉनिक रमर्स
- ग्रीसप्रुफ कागज
- कप लपेट्नुहोस्
- शिपिंग बक्सहरू
- टेप र प्याडिंग सामग्री
- हात टिकटहरू
- स्ट्यान्ड-अप पाउच कागजबाट बनेको छ, १००% प्लास्टिक मुक्त
- मुछिएको तौलिए
- रोलमा तौलिया कागज
- छाला हेरचाह
- औद्योगिक कागज
- कागज तौलिया र ऊतकहरू
- मिडी रोल
- मिनी रोल
- शौचालय कागज
- कार्डबोर्ड बियर ट्रेहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
- कागज कफी कप प्रिन्ट गर्नुहोस्
- कागज कोन ब्याग प्रिन्ट गर्नुहोस्
- कागज स्ट्रुमा प्रिन्ट गर्दै
- कागज स्न्याक ब्याग प्रिन्ट गर्नुहोस्
- कागज नाश्ता ट्रे प्रिन्ट गर्नुहोस्
- कागजको झोलामा छाप्नुहोस्
- कुँदिएको बाँस कटलरी
- नक्काशी काठको कटलरी
- खाना प्याकेजि on मा मुद्रांकन
- गैर खाद्य प्याकेजि on मा मुद्रांकन
- हाम्रो रेकर्ड
- गोपनीयता कथन
- हाम्रो सेवा
- ग्राहक बन्नुभयो?
- सहयोग साझेदारहरू
- लग ईन गर्नुहोस्
- मेरो शपिंग कार्ट
- उत्पादनहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्
- स्टोर कोटिहरू
वेब स्टोरमा २००० भन्दा बढी उत्पादनहरू।
१००% जैविक, कम्पोस्टेबल र टिकाऊ!
प्रत्येक अनुप्रयोगको लागि केहि राम्रो!
दुबै प्रयोज्यहरू र पुन: प्रयोज्य उत्पादनहरू।
हाम्रो प्रस्ताव को लागी वेब स्टोर मा हेर्नुहोस्!
तपाईं लाइभ च्याट मार्फत कल, ईमेल वा हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग प्रश्न छ वा वेब स्टोरमा केहि फेला पार्न सक्नुहुन्न? हामी तपाईंको लागि तयार छौं!
हाम्रो सम्पर्क जानकारी को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हामी यस क्षेत्र भित्रै डेलिभर गर्छौं, बाँकी हामी कुरियर सेवा सहित पठाउँदछौं। हाम्रो वेब स्टोरमा सबै आईटमहरू working कार्य दिन भित्र वितरण गर्न सकिन्छ।
मार्गहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हामी निरन्तर दायरा विस्तार गर्दैछौं र अब हामीसँग २००० भन्दा बढी आईटमहरू छन्! यो तरिका हामी सबैको लागि केहि छ।
वेब स्टोरका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
मानक क्रमबद्ध विधि भर्खरका लेखहरू मूल्य: कमदेखि उच्चसम्म मूल्य: उच्चदेखि कमसम्म नाम: A देखि Z सम्म नाम: Z बाट A सम्म
बोतलबोब २mm मिमी, बोतलहरूको लागि
बोतलबोब mm० मिमी, जुसको बोतलहरूको लागि
बोतलबोब mm० मिमी, साँघुरो क्यानहरूको लागि
बोतलबब mm० मिमी, फराकिलो क्यानका लागि
के तपाई ब्यापार ग्राहक हुनुहुन्छ र विदेशबाट अर्डर गर्नुहुन्छ? तपाईंको VAT नम्बर चेकआउटमा छोड्नुहोस् करबाट छुट पाउन।
नयाँ ग्राहक? एक छुट कुपन प्राप्त गर्नका लागि अब साइन अप गर्नुहोस्!
हिमा बायोप्रोडक्ट्स BV